မြန်မာ .net - Myanmar News LIVE 2017
Search...	Myanmar's net	Search Keyword:	Search
Page 1 of 3	1. အာဖရိကအစည်းအဝေးနဲ့ ပြည်ဝင်ခွင့်	(2017)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးရှားတောင်ပိုင်း တက္ကသိုလ်မှာ နှစ်စဉ် ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ အာဖရိက စီးပွားရေးနဲ့ဖွံ ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစည်းအဝေးပွဲကို ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာအငြင်းခံကြရတဲ့အတွက်အာဖရိက နိုင်ငံသားတစ်ယောက်မှလာပြီးမတက်နိုင်ကြပါဘူး။MichelleQuinnသတင်းပေးပို ...	Created on 22 March 2017	2. ရင်းနှီးမြုပ်နှံခွင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ တန်းတူပေးမည်	(2017)
“ပြည်တွင်းက ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပံ့ပိုးပေးသလိုပဲ ပြည်ပက လုပ်ငန်းရှင်တွေ ကိုလည်း ကျနော်တို့ ပ့ံပိုးပြီးတော့ ကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးပါ့မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရင်နဲ့ မတူတဲ့ စီးပွားရေး အခင်းအကျင်း၊ စီးပွားရေး နယ်ပယ်ကို ...	Created on 19 March 2017	3. မြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် စတုတ္ထအကြိမ်ပုံမှန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ဒုတိယ	(2017)
Authors: နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး... Authors: နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး Read more http://www.president-office.gov.mm/?q=briefing-room/news/2017/03/17/id-11918 Created on 17 March 2017	4. မြန်မာအမျိုးသမီးများ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကဏ္ဍ	(2017)
ဒီနှစ် နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က အမျိုးသမီးတွေ စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု မြှင့်တင်ဖို့ ဖြစ်ပေမဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာလဲ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။FG_AUTHORS: ...	Created on 11 March 2017	5. အမျိုးသမီးတွေ စီးပွားရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ဖို့ ဒေါ်စု တိုက်တွန်း	(2017)
"အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုကိစ္စမှာ အဲဒါကို အဓိကထား ပြောသွားပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ စွမ်းဆောင်မှု မြှင့်တင်လာရင် တိုင်းပြည်ရဲ့ တိုးတက်မှုရှိလာမယ်။"FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... "အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုကိစ္စမှာ ...	Created on 09 March 2017	6. နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့ ကမ္ဘာတဝှမ်း ဆင်နွှဲ	(2017)
မတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့ လှုပ်ရှားမှုတရပ်အနေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတလွှား ထောင်ပေါင်းများစွာ သော အမျိုးသမီးတွေဟာ စီးပွားရေးမှာ သူတို့ရဲ့ အရေးပါမှုကို ပြသဖို့အတွက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ...	Created on 09 March 2017	7. နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက် လုပ်ငန်းကော်မတီတွေ ဖွဲ့စည်း	(2017)
... တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်အသီးသီးက တင်လာတဲ့ ကဏ္ဍတွေအလိုက် တာဝန်ယူစုစည်းဖို့ ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ စီးပွားရေးကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းကော်မတီဝင် ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းက ပြောပါတယ်။ "ကော်မတီတွေမရှိဘူးဆိုရင် ...	Created on 17 February 2017	8. တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရေး အရှုပ်တော်ပုံ မြန်မာ့အရေးပါဝင်	(2017)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ သံအမတ်နဲ့ သမ္မတ လူယုံ တို့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုက အခုချိန်ထိ ရှိနေတုန်းပဲ။ ဒီကိစ္စတွေက တဖြေးဖြေးနဲ့ ပေါ်လာတာပေါ့လေFG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... မြန်မာနိုင်ငံမှာ ...	Created on 01 February 2017	9. ကျောက်ဖြူစီးပွားရေးဇုန်ကို ရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ ဒေသ ခံတွေ တောင်းဆို	(2017)
ရခိုင်ပြည်သူလူထုရဲ့ လူနေမှုဘဝနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးပြီး အာမခံချက်ရှိစေနိုင်မယ့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတွေမရှိသေးတာကြောင့် ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းကိုရပ်တန့်ထားဖို့ စီမံကိန်း ဧရိယာအတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ ...	Created on 26 January 2017	10. ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ ပါဝင်လှူဒါန်း	(2017)
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် ပြည်တွင်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ ပထမဆုံးလှူဒါန်းငွေဟာ ကျပ်ငွေ ၁၁ ဘီလီယံအထိရှိနေပြီး ထပ်မံလှူဒါန်းဖို့ရှိတာတွေပေါင်းရင် ကျပ်ငွေ ၁၅ ဘီလီယံအထိ ရရှိမယ်လို့ ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီ ...	Created on 26 January 2017	11. သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ပွဲ ကျင်းပ	(2017)
... စီးပွားရေး သုတေသန သိပ္ပံ (ERIA) ကချီးမြှင့်တာဖြစ်ပြီး ဦိးသိန်းစိန်ရဲ့ တိုင်းပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲအတွက် အားထုတ်ကြိုးပမ်းခဲ့မှုကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ အခုလို ဆုချီးမြှင့်တာဖြစ်တယ်လို့ ...	Created on 26 January 2017	12. မြန်မာကို အင်ဒိုနီးရှားထံက လေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်	(2017)
... ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးအတွက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို လေ့လာနိုင် ပါကြောင်း၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြဿနာတွေပြေလည်ရေးအတွက် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုသလို အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် ...	Created on 26 January 2017	13. ကုန်သွယ်ရေးတံခါးဖွင့်ဝါဒ တရုတ်ခေါင်းဆောင် ထောက်ခံ	(2017)
ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကာကွယ်တဲ့ဝါဒ ကျင့်သုံးတာဟာ အမှောင်ခန်းထဲမှာ တံခါးပိတ်နေတာနဲ့တူပြီး - မိုးဒဏ်လေဒဏ်က လွတ်ကင်းကောင်း လွတ်ကင်းနိုင်ပေမဲ့ - အလင်းရောင်နဲ့ လေကောင်းလေသန့်တော့ ရနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။FG_AUTHORS: ...	Created on 19 January 2017	14. ထိုင်း စီးပွားရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာရောက်မည်	(2017)
ထိုင်း ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Somkid Jatusripitak ဦးဆောင်တဲ့ စီးပွားရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ ထိုင်း နဲ့ မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေးအတွက် လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့ကနေ ...	Created on 18 January 2017	15. ကိုဖီအာနန် ကော်မရှင်အဖွဲ့ ဝင်တွေ ကျောက်ဖြူနဲ့ ရမ်းဗြဲက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို သွားရောက်	(2017)
... ကမန်တိုင်းရင်းသား တိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်လှိုင်ဝင်း က ပြောပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဟာ ဒီခရီးစဉ်အတွင်း ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံအရပ်ဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့ ...	Created on 18 January 2017	16. မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို တရုတ် ဘယ်လို ကူညီသင့်သလဲ	(2016)
တရုတ်အစိုးရဟာ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ စီးပွားရေးအရ အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၊ အဓိက ကုန်သွယ်ဖက် ဖြစ်လာသလို၊ နယ်စပ် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေ ကြီးစိုးတဲ့ နယ်မြေတွေကနေလည်း သစ်၊ ကျောက်စိမ်း နဲ့ သယံဇာတ မျိုးစုံကို ထုတ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ...	Created on 09 January 2017	17. ABSDF နဲ့ ALP အဖွဲ့ဝင်တချို့ဖမ်းဆီး ခံထားရတဲ့ကိစ္စ အဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့ ဆွေးနွေး မည်	(2016)
... ချင်းမိုင်မြို့မှာကျင်းပဖို့ လျာထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (ALP/ALA) က ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီီးတစ်ဦးနဲ့ စီးပွားရေးတာဝန်ခံတစ်ဦးကို ...	Created on 04 January 2017	18. နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ မိန့်ခွန်း	(2016)
... ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရေး၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ စီးပွားရေးမူဝါဒ မျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့အညီ တိုင်းဒေသ ကြီးနဲ့ ပြည်နယ်တွေအကြား ဘက်ညီမျှတစွာ စီးပွားရေး အခြေအနေကောင်းတွေရရှိအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရေး စတဲ့ ၆၉ နှစ်မြောက် ...	Created on 04 January 2017	19. နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ နှစ်သစ် ကူး မိန့်ခွန်း	(2016)
... အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ ပြည်သူလူထုအသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်နဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန် အရပ်ရပ်ကို ထိပါးလာမှုတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ တာဝန်ရှိကြောင်းလည်း ...	Created on 01 January 2017	20. ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရ ခက်နေသေးတဲ့ ရခိုင်အရေး	(2016)
ဒီဇင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၆ - ရခိုင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရရဲ့ကိုင်တွယ်မှုတွေကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကြီးများနဲ့ စီးပွားရေးရာဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်မိုးထွန်း ...	Created on 25 December 2016	StartPrev123NextEnd